BEAUCERON IMBWA INOBEREKA RUZIVO UYE MIFANANIDZO - IMBWA
Beauceron Imbwa Inobereka Ruzivo uye Mifananidzo
'Uyu ndiye Classie' Ellita de Nanrox pa6 monthe akura. Iye anotora chikamu mukubata uye kufudza uye isu tichakurumidza kutanga flyball, kunhuwidza uye skijoring. Akanyarara mumba uye anoda kutamba kunotora panze. '
Tamba Imbwa Trivia!
Chinyorwa cheBeauceron Sanganisa Mbeu Dzinobereka
Imbwa DNA Miedzo
Beauceron imbwa hombe, inomhanya, inoshanda imbwa. Muviri wakareba zvishoma pane kureba. Musoro wakareba uye uchienderana nemuviri. Dehenya rakaenzana pakureba netete rakamanikana, rakanongedzwa kana rakapamhamha. Kumira kunodomwa zvishoma. Meso machena eredza akareba uye akaenzana oval. Iyo hafu yakatemwa kana kudonhedzwa-nzeve dzakasimudzwa kumusoro, kungave kutsemurwa kana kusiiwa zvakasikwa. Iyo AKC standard inodaidzira zvakapetwa kaviri dewclaws pane yega yega gumbo rekuseri uye inokanganisa imbwa isina iyo. Muswe wakapetwa, unotakurwa wakadzika uchisvika padiki kusvika kune hock inoita chimiro che 'J.' Iyo yakapfava, ipfupi-kaviri-jasi rine vhudzi refu pane ese muswe uye kumashure. Jasi rekunze rakaomarara nepo jasi repasi riri nyoro uye silky. Iyo inouya yakasviba ine yakasarudzika tan mamaki uye mune isina kujairika harlequin jasi ine zvigamba zve grey, nhema uye tan. Nguo dzeharlequin dzinofanirwa kuve dzakasviba kupfuura grey isina chena. Muimbwa nhema uye dzakasviba, iwo mamaki ematani anoonekwa mumachira maviri pamusoro pemeso, pamativi emuromo, achidzikira kumatama, asi usasvike pazasi pezeve. Zvakare pahuro, pasi pemuswe uye pamakumbo nepachifuva. Kuiswa mucherechedzo pachifuva kunofanirwa kuoneka senzvimbo mbiri, asi ndiro yechipfuva inogamuchirwa.
imbwa dzinobereka zvishoma zvingangodaro kuruma
Beauceron imbwa yakashinga, yakangwara kwazvo, inoteerera, inoshanda. Iine shungu uye inoda kufadza, inokunda pakuteerera kwekuteerera, inokurumidza kwazvo kunzwisisa uye kupindura kumirairo yatenzi wayo. Beauceron inokwanisa kuita basa remapurisa, sezvo rakavimbika, rine moyo murefu, rakatendeka, risingatyi uye rakangwarira, richikwanisa kuona njodzi. Iyo imbwa yakakodzera, inochengetedza imbwa iyo inoda kushanda uye kurovedza muviri munzvimbo dzakavhurika. Imwe yematarenda ayo mazhinji ari kushanda sembwa inofudza. Iyo inogona kuyedza kufudza vanhu uye chero chinhu chipi zvacho mukuona kwayo uye inoda kudzidziswa izvi hazvigamuchirwe. Kune nzvimbo dzaunogona kutora imbwa kwavanogona kuratidza kugona kwekufudza nemapoka emakwai. Iyi inzira yakanaka kwazvo yekuti vabudise simba panguva imwechete vachishanda pfungwa dzavo. Uine muviri wakakwana Beauceron yako ichave yakadzikama. Zvichava zvakanaka nembwa dzinoziva uye dzinogona kudzidza kufambidzana nedzimwe imbwa nekatsi. Haifanirwe kusiiwa iri yoga kwenguva yakareba isina kurovedza muviri Zvakakwana kudzidziswa na tenzi akasimba chinofanirwa, pamwe neiyo chiyero chakakodzera chekurovedza muviri uye akasimba pack mutungamiriri, kuti agadzire akadzikama, anoteerera imbwa. Sangana nevamwe zvakanyatsonaka kana uchiri mudiki kurwisa zvido zvehasha uye uve nechokwadi chekuchengetedza imbwa iri pasi pekutonga kana dzimwe imbwa dziripo. Dzidzisa imbwa iyi kuremekedza vanhu nekusazvibvumira svetuka uye isingabvumidze kuti ipinde pamusuwo kutanga. Vanhu vanofanira kugadzira imbwa chitsitsinho padivi kana kumashure kwavo kana uchifamba . Iyo yakapa yakatanhamara mhedzisiro seye muchengeti wepfuma, asi panguva imwecheteyo inokudzwa senge shamwari imbwa. Chinangwa pakudzidzisa imbwa iyi ndechekuti kuzadzisa pack pack chinzvimbo . Ihwo hunhu hwepanyama kuti imbwa ive ne odha muhomwe yavo . Kana isu vanhu vanogara nembwa , isu tinova pack yavo. Iyo pasuru yose inoshandira pasi pemutungamiriri mumwe chete mitsara inotsanangurwa zvakajeka uye mitemo yakaiswa. Iwe nevamwe vanhu vese UNOFANIRA kuve wakakwira kumusoro muhurongwa kupfuura imbwa. Ndiyo chete nzira hukama hwenyu hunogona kubudirira. Kana yakanyatsodzidziswa uye kushamwaridzana, iyi imbwa yakanaka kwazvo uye shamwari huru yemhuri. Izvo zvinofanirwa kuziva kuti ndiani boss uye zvozotevera , asi ramba uchifunga, iyi imbwa inodzivirira chaizvo inongotevera munhu akasimba-ane pfungwa. Kana iri yakasimba pfungwa kupfuura iwe, zvinotarisira kuti iwe utevere IT. Iyo Beauceron inowanzo kuve yakanaka nevana kana ichiona vanhu sevane masimba masimba uye yakave inoshamwaridzwa. Izvo zvinoteerera mirairo kubva kunhengo dzese dzemhuri. Rudzi rukuru rwune simba urwu rwunokura nekukurumidza, rwunosvika mapaundi makumi mana kungori nemwedzi mitatu chete. Zvinogona kukurira kumwana mudiki. Mbwanana dzinoshanda zvakanyanya uye dzinononoka kukura. Iyo Beauceron inofanirwa kuve yakanyatso uye yakanyatso kufambidzana. Beauceron anga aripo zvakanaka kushamwaridzana uye akarerwa anowirirana zvakanaka mumamiriro ezvinhu akajairwa nevana, uye izvi zvakare zvinovimbisa kuti dzimwe imbwa nezvipfuyo hazvizounze matambudziko.
Kureba: 24 - 27 ½ inches (32 - 70 cm)
Kurema: Kusvika pamapaundi 110 (50 kg)
Iyo Beauceron kazhinji ine hutano, hwakasimba rudzi. Mimwe mitsara iri inowanzoita bloat uye senge chero rudzi rupi zvarwo runopfuura makirogiramu makumi mana, Beaucerons vanokanganisa hip dysplasia. Makumi mapfumbamwe neshanu muzana evaberekesi vese muU.S. vanoberekera chete chiuno chinotengeswa stock.
Iyo Beauceron ichaita zvakanaka mufurati kana yakanyatso shandiswa. Ivo vanoita zvine mutsindo mukati meimba uye vanozoita zvakanakisa pamwe neiyadhi hombe.
Iyo Beauceron ibara rinoshanda rinoda yakawanda yezvose zviri zviviri kurovedza muviri nepfungwa . Ivo vanoita zvakanyanya nerumwe rudzi rwebasa rekuita. Kana miviri yavo nepfungwa zvisina kuzadzikiswa zvakakwana vanozonetsa kubata uye zvinoparadza . Ivo havagutsikane nekutenderera kwechikamu katatu pazuva. Vanoda zvakasiyana-siyana. Tora ivo kufamba kwenguva refu, panguva iyo ivo vanokwanisa kumhanyisa vakasununguka kubva pa leash uye kutamba (munzvimbo yakachengeteka). Kana imi vaviri muchiita kunge muchinakidzwa nazvo, nyoresai kosi yekudzidzisa kudzidzisa kana kukwikwidza mumakosi ehunyanzvi (kunyangwe mumakwikwi zvinogona kunge zvisina kubudirira kupfuura mamwe marudzi akakodzera). Dzidzisa imbwa iyi kuremekedza vanhu, ichirova ichitungamira, ichipinda nekubuda gedhi nemikova mumashure mevanhu.
About 10-12 makore.
Dzinenge nhanhatu kusvika ku7 imbwa
Iyo jasi reBeauceron haidi kutariswa kwakanyanya. Kumwe kuchenesa nguva nenguva nekutarisisa panguva iyo imbwa iri kuteura kwakakwana. Beaucerons avhareji emhedhi.
Iyo Beauceron isingawanzo mukati meUnited States. Chizvarwa chekuFrance chekufudza chine zvinyorwa zvekare zvekare zvakanyorwa muzvinyorwa zveRenaissance zva1578. Muna 1863 murume anonzi Pierre Megnin akasiyanisa mhando mbiri dzembwa dzemakwai, imwe iine bhachi refu, rakazozivikanwa se Briard , uye imwe yacho ine bhachi pfupi, iyo yakazova Beauceron. Muna 1863 Beauceron yakaratidzwa mune yekutanga Canine Kuratidzwa muParis. Muna 1897 kekutanga mufudzi imbwa kirabhu yakavambwa uye vese Beauceron neBriard vakagamuchirwa mariri. Gore ra1889 risati rasvika vaBeauceron naBriard vaive nemukurumbira wekuchengetedzwa kwemakwai aive akashinga asi ainyanya kuda kubvarura nekuruma mukudzivirira boka rayo. Ose ari maviri marudzi emhando dzakapfaviswa kuburikidza nekusarudza kusanganisa. Muna 1889, zita rekubereka uye zviyero zvakaiswa. Muna 1911 rakazvimiririra rakazvarwa kirabhu rakaumbwa chete yeBeauceron, ichimisikidza zviri pamutemo kubva kune Briard . Beauceron inoshanda sevachengeti vemakwai munzvimbo dzakashama dzinodzivirira makwai pamwe nezvimwe zvipfuyo. Rudzi urwu rwaishandiswawo muchiuto. Vachiregeredza kuputika kwemabhomba kana pfuti dzemoto, imbwa dzakashandiswa kumhanyisa mameseji, kuona zvimbambaira, kutora nzira, kutsigira zviito zvemakomando, kutsvaga vakakuvara, uye kutakura chikafu nemabara kumberi. Iyo Beauceron, senge dzakawanda makwai anofudza makwai, zviri nyore kudzidzisa mabasa anopfuura kutarisira boka kana mombe. Kudzikama kwake uye kugona kutevera mirairo pasina kuzengurira kwakaratidzirwa zvakanaka mukati mehondo huru mbiri muEurope. Nhasi iyi imbwa yakakosha inoshanda ichiri kushandiswa semufudzi, imbwa yevarindi uye nemapurisa eFrance nemauto. Rudzi urwu rwuri kuwana mukurumbira muWestern Europe neNorth America sevatariri vemhuri uye shamwari, asi ivo vachiri vashoma. Beauceron yakagamuchirwa muAKC muna 2006 pasi peboka rekufudza. Mamwe matarenda eBeaucerons ari kuteedzera, kufudza, kurinda, kuchengetedza, basa remapurisa, basa remauto, kugona, kuteerera kwemakwikwi, French Ring Sport uye Schutzhund.
ACA = American Canine Sangano Inc.
AKC = American Kennel Kirabhu
DRA = Imbwa Registry yeAmerica, Inc.
NABC = North American Beauceron Kirabhu
NAPR = North America Purebred Registry, Inc.
NKC = Kirabhu yeNational Kennel
UKC = Yakabatana Kennel Kirabhu
IntCH Arc's Un Reve Yekuziva CGCA RA (Camo) iyo harlequin Beauceron pamwedzi gumi nemisere-- 'Camo parizvino iri kukwikwidza muAKC Kuteerera, Rally uye Kusimbisa. Iye ari kudzidzirawo Agility. Uye iye ari Medical Alert / Mobility Service Imbwa. Camo ine yakawanda yakaderera nguva yekutamba naye Kugona -vakoma nevanun'una uye vanorota nzira nyowani dzekupokana nemuridzi wake. '
IntCH Arc's Un Reve Yekuziva CGCA RA (Camo) iyo harlequin Beauceron pamwedzi gumi nemasere anoshanda seMedical Alert / Mobility Service Imbwa.
mifananidzo yevaChinese vakapinza imbwa
Abbee Beauceron aine mwedzi mitanhatu ekuberekwa— 'Takatora Abbee Beauceron ane mwedzi mitanhatu yekuberekwa kubva pakununurwa. Isu takaudzwa kuti aive nehasha uye asingatenderwe. Iye aive akatarisana zvachose mukati mesvondo isu tamuwana iye mumba medu. Anotakura zvese zvehunhu zvakanyorwa mune rako reruzivo peji kune iyo tsamba! Chaizvoizvo rudzi rwusinganzwisiswe, sedzakawanda imbwa dzekudzivirira. Takaisa nguva yakawanda nesimba mukuzvidzidzisa pachedu uye takapihwa mubairo kakawanda nekuita kudaro nekuva nembwa hombe yakadaro! '
'Abbee Beauceron ane mwedzi gumi nemasere achishanda mombe. Iye chaiye akasikwa. '
Abbee Beauceron ane mwedzi gumi nemasere achishanda mombe.
Poni mukadzi Beauceron pazera ramakore mana anorema mapaundi makumi masere
Beauceron puppy pamasvondo gumi ekuberekwa- 'Uku ndiko Kupenya Ember de Nanrox aka Ember akafananidzirwa pamasvondo gumi ekuberekwa. Ndiye mwana anoshingaira anofarira kutamba nemhando dzese dzematoyi uye anowirirana ne dzimwe mhuka mumba kusanganisira zvimwe imbwa , katsi uye chinchillas . Akangwara kwazvo uye anodzidza nekukurumidza nekusimbisa uye anoteedzera vanhu vake chero kwavanoenda. Kana iye akura zvakakwana iye anonyanya kutora chikamu mukugwinya. '
Taz Beauceron aine makore matatu nehafu ekubata Frisbee— 'Taz akatanga aine imba yakanaka uye mhuri yake ikazopinda mumatambudziko, saka uyo akamubereka akamutora semununuri zvinova ndizvo zvatakamutora semhuri yedu. Anokunda mukugwinya, kufudza, Frisbee uye kuteedzera. Taz yakanaka mune ese mamiriro ekunze sezvo isu tine imba muColorado neArizona. SeBeauceron ese, anenge ari kure nevanhu vaasingazive, asi kana agadzikana, anova muchina unonanzva. '
dema uye chena french bulldog
Haunter Beauceron ane makore maviri ekuberekwa (UKC CH. Kudzungaira Mweya Vom Wildweg CGC) - Kune rudzi rumwe chete rwembwa inogona kuzviita zvese .... Kuchengeta, Kuchengetedza, Kugwinya, Kuteerera, Kudhirowa, Schutzhund. Kuchengeta, Imbwa Yebasa, Mapurisa K9, Flyball…. Kuzivisa Beauceron. '
Ona mimwe mienzaniso yeBeauceron
Beauceron Mifananidzo 1
Kunzwisisa Imbwa Maitiro
Chinyorwa cheGadhi Imbwa
hafu pitbull hafu shar pei
alaskan malamute wolf musanganiswa uri kutengeswa
hafu chihuahua hafu weenie imbwa
imbwa dzinza dogue de bordeaux
dema lab lab pointer sanganisa vana
Mwedzi mitatu mbichana mbichana